रातो टिका लगाएका यी ढकालले सरकारलाई रल्याए ! कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री एकाएक किन फर्किए ?
आज : २०७५ पौष ४ बुधबार | Today: 19 Wednesday, 2018
२०७५ मङ्सिर १५ शनिबार ००:००:०० प्रकाशित
छायाचन्द्र भण्डारी,काठमाडौँ । अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि ,जलवायू र विश्वव्यापी मान्यता’ विषयका एजेण्डामा इसाई धर्मको प्रचार गर्ने उद्देश्यले युनिभर्सल पिस फेडरेशनको आयोजनामा एसिया प्यासिफिक समिट २०१८ होटल ह्यातमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त कार्यक्रममा विदेशी अतिथिहरूको बाक्लो उपस्थिती रहेको छ ।
उक्त सम्मेलनले सरकारलाई समेत विवादमा पारेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको छ । विरोध बढेसँगै एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन आजै फर्किएकाछन् । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री एकाएक किन फर्किए ? आमनागरिकले चासो बढाएकाछन् ।
यो सम्मेलन नेपालमा बढ्दै गएको हिन्दू धर्मलाई लक्षित गरेर गर्न लागिएको हो र यसका लागि नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष एकनाथ ढकालको सक्रियतामा भएको जानकारहरूले बताएका छन् । यो सम्मेलनसँगै ढकालको नियतमाथी गम्भिर प्रश्न खडा भएको हो । उनले सरकारलाई समेत आफ्नो पन्जामा पारेर सममेलन गर्न लागेको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेकाछन् । रातो टिका लगाएका यी ढकालले सरकारलाई कसरी रत्याए ? खोजीको विषय बनेको छ ।
ईशाई धर्मको प्रचारका लागि गर्न लागिएको सो संस्थाको कार्यक्रमको विरोध प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गरेपछि सरकार कार्यक्रमको सहआयोजकबाट पछि हटेको थियो ।
म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेनलाई सरकारले अतिथि सत्कार नगर्ने भएपछि ढकाल समस्यामा परेको चर्चा थियो ।
सरकारलाई समेत विवादमा पार्ने रातो टिका लगाएका इसाई धर्मका प्रचारक एकनाथ ढकाललाई कारबाही होला ? आम नागरिकको चासो बढेको छ । त्यसैगरि सरोकारवालाहरु ढकालको आर्थिक फड्कोका बारेमा पनि टिकाटिप्पणी गरेकाछन् । उनको कालोधनका बारेमा छानबिन हुनु पर्ने माग सरोकारवालाहरुको रहेको छ ।
दक्षिण कोरियाको चर्चको पैसामा नेपालमा राजनीति गर्दै आएका परिवार दलका अध्यक्ष ढकालले उक्त संस्थाको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई विदेश भ्रमण गराउँदै आएका छन् । मानव तस्करीको आरोप समेत लागेका ढकालको पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैन तापनि सत्तारुढ दल नेकपामा उनको राम्रै पकड रहेको बताइन्छ ।
राजनीतिक आवरणमा विभिन्न धन्दामा सक्रिय ढकालको धर्म प्रचार अभियानलाई सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ्गसम्मले साथ दिने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौँको ह्यात होटलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन शान्ति तथा विकास, सुशासन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने भनिएता पनि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित पारेर इशाई धर्मको प्रचार गर्नु हो भन्ने चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
नेपालमा ढकाललाई इशाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएको समाचारमा उल्लेख छ । ढकालको कार्यक्रममा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, नेतृ सुजाता कोइराला, आरजु देउवालाई समेत प्रभावमा पारेको चर्चा चलेको छ । यद्धपी रातो टिका लगाएका इसाई धर्मका प्रचारक ढकाललाई कस्तो कारबाही होला ? जन चासो ह्वात्तै बढेको छ ।
यसैबिच,आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।
नेपालको हिन्दुत्वमाथि आक्रमण गरेकोले आफूहरुले यस समिटलाई बहिष्कार गरेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले भने,‘यो समिटले नेपालको हिन्दुत्वमाथि प्रहार गरेको छ, त्यसैले हामीले बहिष्कार गर्यौं । यो समिटमा कांग्रेसका कोही पनि शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनुभएको छैन् ।’ आजको उद्धघाट्न सत्रमा कांग्रेसका कोही पनि नेताहरु देखिएनन् ।
काठमाडौंमा शुरु भएको ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ को उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले गरे कार्यक्रम नै बहिष्कार
‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ उद्घाटन सत्रमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन् । उक्त समिटमा नेकपाकै अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालपनि सहभागी भएनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अन्तिरिम मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्राई र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि समिटमा सहभागी भएनन् ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको १२ करोड कसले खायो ?